Busch Thor: In la kordhiyo khidmadda xanaannada dhallaanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ebba Busch Thor (KD): Waa in la xadido tirada dhallaanka ee koox ahaan loo hayo. sawir: Susanna Hållbus / Sveriges Radio
Busch Thor: In la kordhiyo khidmadda xanaannada dhallaanka
La daabacay måndag 20 augusti 2018 kl 08.12
Hoggaamiyaha xisbiga Kristdemokraterna Ebba Busch Thor oo maanta qayb ka ahayd wareeysigii laanta wararka Ekot ee hoggaamiyeyaasha xisbiyada ee xilliga ololaha doorashada ayaa soo jeedisay in la xadiddo tirada kooxaha ee goobaha xanaanada dhallaanka.
Kristdemokraterna ayaa doonaya in la sharciyeeyo in ugu badnaan 12 carruur ah lagu koobo kooxaha fasallada ee xanaanada dhallaanka.
– Hindisiheena ah in la kordhiyo kharashka xanaanada caruurta ayaa waxan ku jirin reeraha uu dakhligoodu hooseeyo. Kharashka lagu kordhinayo xanaanada ilma kasta ayaa noqon karta ugu yaraan 300 oo karoon, ayey tiri Ebba Busch Thor.
Kharashkaa ayaa haddana loo eegayaa inta caruur ee reerka isku wakhti u dhigata dugsiga xanaanada.
Ebba Busch Thor ayaa sheegtay inaan wax badan lagu kordhin 16-kii sannadood ee ugu danbeeyey kharashka dugsiyada xanaanada.
Mar kale iyo hogaamiyaha Kristdemokraterna Ebba Busch Thor:
– Waan ogahay inaaney aheyn wax lagu farxo in kharashka la kordhiyo. Balse waxan ogahay in waalidiin badani diyaar u yihiin innuu kharashka uu bixinayo kordhiyo si caruurtoodu u hesho xanaano muuqata.
Ebba Busch Thor ayaa wax laga weydiiyey talaabada laga qaadayo degmooyinka aan fulin iney caruurta tiradooda ku soo koobaan 12 koox kasta waxey tiri:
– Waxaan u arkaa iney ganaax muteysato degmadii fulin weyda arrintaa. Waxaase taa ka horeysa inaan marka hore degmooyinka siino dhaqaale ay howshaa ku fuliyaan, sida ay sheegtay Ebba Busch Thor, hogaamiyaha xisbiga Kristdemokraterna.